Saddexdan sheeko iyo xalka siyaasadeed ee maanta sidee isu qabtaan?..
Sunday September 20, 2020 - 16:41:46 in Wararka by Mogadishu Times
Ku: Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Maxamed, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Ku: Madaxweyne Siciid Cabdullahi Deni, Madaxweynaha Puntland Ku: Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, Madaxweynaha Jubbaland Ku: Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed, M
Ku: Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Maxamed, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Ku: Madaxweyne Siciid Cabdullahi Deni, Madaxweynaha Puntland Ku: Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, Madaxweynaha Jubbaland Ku: Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed, Madaxweynaha Koonfur Galbeed Ku: Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare, Madaxweynaha Hirshabeele Ku: Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye, Madaxweynaha Galmudug Ku: Guddoomiye Cumar Maxamuud Maxamed, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir SALAAN Kolka hore salaan sharaf, milge iyo maamuus gobannimo baan idinku salaamay, ASCW. Ma is weydiisay? Haddiiba ay dhacdo inaad isweydiinayso waxa kalifay soo-jeedinta taladan, ama aad ka shaki qabtid talo madaxda loo jeediyaa waxay tari karto, waxaad ila eegtaa sheekadan kooban. Ad by Valueimpression Ninkii Wiilashiisa Uga Tagay Dardaaranka Waxaa la sheegay in uu nin 3 wiil oo uu dhalay uga tagay hanti badan. Waxaa uu si gaara uga tagay dardaaran qoraal ah isaga oo ka codsaday inay warqadda furaan goortii uu dhinto. Markuu dhintay bay wiilashii warqaddii dardaaranka fureen. Waxaa ku qoran in uu si gaara ugu qaybiyey 17 geela oo hantidiisa badan kamida waxaana uu ku dardaarmay in wiilka ugu weyn la siiyo kala bar 17ka geela ah (1/2), wiilka xigana la siiyo saddex-meelood meel (1/3) wiilka ugu yarna sagaal-meelood meel (1/9). Haddaba, xisaab ahaan way suurtoobi wayday inay wiilashii 17 geela kala bar u qaybiyaan, ama saddex-meelood u kala qaybiyaan, ama sagaal-meelood u kala qaybiyaan. Muran iyo khilaaf xoogan baa soo dhex galay wiilashii waxaana ay ka gaadhay meel daran. Ka bacdi waxay ku heshiiyeen inay isula tagaan cid kala saarta waxaanay isula tageen nin xikmad badan. Ninkii si fiican buu u dhagaystay wiilashii waxaana ay isla xisaabiyeen qaybtii geela iyo dardaarankii oo noqday sidan: • Markii 17 geela 2 meelood loo qaybiyey waxay wiilka weyn qaybtiisii noqotay 8.5. • Markii 17 geela 3 meelood loo qaybiyey waxay wiilkii labaad qaybtiisii noqotay 5.66. • 17 geela 9 meelood loo qaybiyey wiilkii ugu yaraa waxay qaybtiisii noqotay 1.88 Kolkii xisaabtii sidaa u adkaatay baa waxgaradkii fekeray oo arrintii rog-rogay, xisaabtiina caqli ku daray. Waxaa uu xoogga saaray in uu keeno xal wada-ogol ah, waqtina waa galiyey. Ka bacdi waxa uu yeelay sidan: